Baby and Saliva Drooling – My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
Baby and Saliva Drooling
ကလေးတဈယောကျဟာ.. ပုံမှနျအားဖွငျ့ အသကျတဈနှဈကြျောထိ သှားရညျလေးတှေ ကနြတော၊ အမွုပျလေးတှေ စီနတေတျတာမြိုး ရှိပါတယျ…ဒီလို သှားရညျတှေ ထှကျနရေခွငျးဟာ.. မှေးဖှားပွီးကာစမှာ ကလေးရဲ့ မြိုခနြိုငျစှမျးနဲ့ ပါးစပျကွှကျသားတှေ သနျမာမှု မရှိသေးတာကွောငျ့ ဖွဈပါတယျ..ဒါကွောငျ့ ကလေးအိပျနခြေိနျမြိုးတှေ သှားရညျလေးတှေ စီးကနြတောမြိုး တှရေ့တတျပါတယျ..
ဒီလို သှားရညျထှကျနခွေငျးဟာလညျး ကလေးရဲ့ သှားလေးတှေ ပေါကျဖို့ရာအတှကျ အထောကျအကူ ပွုလို့ပါပဲ…
ဒါပွငျ.. saliva ရဲ့ တခွား ကောငျးကြိုးတှလေဲ ရှိပါသေးတယျ..
– အစားစားရာမှာ ခြော့မှအေောငျ ပွုလုပျပေးခွငျး
– သငျ့ကလေးရဲ့ ခံတှငျးကို စိုစှတျနစေခွေငျး
– အစာမြိုခရြာတှငျ လှယျကူစခွေငျး
– သှားပိုးစားတာကို ကာကှယျပေးခွငျးတှေ အပွငျ အစာကို ခဖြေကျြစနေိုငျတဲ့ အစှမျးသတ်တိလဲ ရှိပါသေးတယျ..
– အသကျတဈလမှ သုံးလလောကျထိ ကလေးဟာ လှဲလြောငျးနတော မြားတတျလို့ သှားရညျတှဲကခြွငျးဟာ သိပျမသိသာပါဘူး..သို့သျော ကလေးဝမျးလြားမှောကျပေးခြိနျ၊ အမှီနဲ့ ထိုငျခြိနျမှာတော့ သတိထားမိနိုငျပါတယျ…
– အသကျခွောကျလလောကျမှ ကလေးဟာ သှားရညျတှဲကလြွငျးကို အနညျးငယျထိနျးနိုငျလာပါပွီ..သို့သျော သှားစပေါကျခငျြနခြေိနျမှာ အရုပျ အရာဝတ်ထုစသညျတို့ကို ကိုကျတာမြိုးတို့မှာဆိုရငျတော့ သှားရညျလေးတှေ ထှကျနတေတျပါသေးတယျ.
– အသကျ ကိုးလောကျမှာ.. ကလေးဟာ ကိုယျတိုငျမှောကျနိုငျပွီး.. တှားသှားတတျပွီ… ဒီလို မှောကျလကျြသှားသျောငွား သှားရညျတှဲကခြွငျးကိုတော့ ထိနျးနိုငျလာပါပွီ..
-အသကျ ၁၅ လလောကျမှာ.. ကလေးဟာ လမျးလြှောကျနိုငျပွီ. ပွေးနိုငျပွီဖွဈပွီး ဒီလို ခြိနျမြိုးမှာ သှားရညျတှဲကခြွငျးဟာ ရှားသှားပါပွီ..သို့သျော fine motor activitiesလို့ချေါတဲ့ ကလေးနဲ့ ပတျသတျတဲ့ ဆော့ကစားနညျးလေးတှမှော အာရုံစိုကျနတောမြိုးလုပျရတဲ့အခါမှာမြိုးမှာတော့ တခါတရံ တှဲကတြတျပါသေးတယျ.. ဒါပွငျ သှားပေါကျဖို့ရာ အတှကျလဲ သှားရညျလေးတှဟော ပိုတော့ ထှကျနဆေဲပါ…
– အသကျ ၁၈ လလောကျမှာ.. ကလေးဟာ စားစရာ တဈခုကွောငျ့. သို့မဟုတျ သူကွိုကျနှဈသကျတဲ့အရာတဈခုကွောငျ့သာ သှားရညျတှဲကတြာမြိုး ရှိတတျပါတော့တယျ..
အသကျ၂ နှဈလောကျမှာတော့ ဒီလို သှားရညျတှဲကခြွငျးဟာ အနညျးငယျမြှ (သို့) လုံးဝ မရှိတော့ပါဘူး…
ဒါကွောငျ့ ကလေးငယျလေးတှေ(toddlers)အတှကျ သှားရညျ တှဲကခြွငျး(saliva drooling)ဟာ ပုံမှနျ ဖွဈသလို ကွီးထှားမှုနဲ့လညျး သကျဆိုငျပွီး သှားပေါကျဖို့ရာအတှကျ အထောကျအကူပွုနိုငျပါသေးတယျ..ဒါပွငျ ကလေးအား အစားကြှေးဖို့ရာ ၊ အစာခဖြေကျြဖို့ရာ တှမှောလဲ လှယျကူစပေါတယျ..
ပွောခဲ့သလို ကလေးအသကျအရှယျအပိုငျးအခွားနဲ့လိုကျပွီး သှားရညျတှဲကခြွငျးကို ထိနျးနိုငျစှမျးရှိတာမို့.. မိဘတှအေတှနေဲ့ ကလေးရဲ့ နထေိုငျမှု ပုံစံကို ကွညျ့ခွငျးအားဖွငျ့.. ပုံမှနျလား… သာမနျထပျ ပိုပွီး သှားရညျတှဲကနြလေားဆိုတာ သိနိုငျပါတယျ..
ကလေးရဲ့ သှားရညျထှကျတာ၊တှဲကတြာကို ဖွဈစနေိုငျတဲ့အခကျြတှမှော
– teething လို့အချေါတဲ့ ငယျသှားစပေါကျဖို အားယူနခြေိနျ
– Food အစားအသောကျကို စိတျဝငျစားခြိနျ
– နှာပိတျနေ၍ ပါးစပျဖွငျ့ အသကျရှုနတေဲ့အခြိနျ
– အရုပျ (သို့) အရာဝတ်ထု တဈခုကို စိတျဝငျစားခွငျး
– အာရုံကွောဆိုငျရာ ပွသနာ ရှိခွငျး
– ဆေးတမြိုးမြိုးနဲ့ ဓာတျမတညျ့ခွငျး..ဒါတှကွေောငျ့ အဓိက ဖွဈပါတယျ…
ဒါပွငျ ကလေးရဲ့ သှားရညျတှဲကတြာကွောငျ့ ပါးစပျအောကျနှုတျခမျး၊လညျပငျးနဲ့ ရငျဘတျတှမှော ယားယံတာမြိုးရှိပါက ဆရာဝနျကို ပွသပွီး သငျ့လြျောသော ဆေး လိမျးတာမြိုး ပွုလုပျနိုငျပါတယျ….
ကလေးရဲ့ အသကျဟာ လေးနှဈကြျောသှားထိ သှားရညျတှဲကနြတောမြိုး ရှိနမေယျ… ဒါမှမဟုတျ ပွောခဲ့တဲ့ အခကျြတှနေဲ့ မကိုကျညီပဲ သှားရညျပိုထှကျနတေယျလို့ ခံစားရပါက ကလေးအထူးကု (သို့) နီးစပျရာ ဆေးရုံ ဆေးခနျးမှာ သှားရောကျပွသပွီး ကုသမှုခံယူနိုငျပါတယျ…
ကနျြးမာပြျောရှငျပွီး သနျမွနျ ဖတျြလတျသော သားသားမီးမီးမြား ဖွဈကွပါစလေို့ တောငျးဆုမတ်ေတာပွုလကျြ….
က​လေးတစ်​​ယောက်​ဟာ.. ပုံမှန်​အားဖြင့်​ အသက်​တစ်​နှစ်​​ကျော်​ထိ သွားရည်​​လေး​​တွေ ကျ​နေတာ၊ အမြုပ်​​​လေး​တွေ စီ​နေတတ်​တာမျိုး ရှိပါတယ်​…ဒီလို သွားရည်​​တွေ ထွက်​​နေရခြင်းဟာ.. ​မွေးဖွားပြီးကာစမှာ က​လေးရဲ့ မျိုချနိုင်​စွမ်းနဲ့ ပါးစပ်​ကြွက်​သား​တွေ သန်​မာမှု မရှိ​သေးတာ​ကြောင့်​ ဖြစ်​ပါတယ်​..ဒါ​ကြောင့်​ က​လေးအိပ်​​နေချိန်​မျိုး​တွေ သွားရည်​​လေး​တွေ စီးကျ​နေတာမျိုး ​တွေ့ရတတ်​ပါတယ်​..
ဒီလို သွားရည်​ထွက်​​နေခြင်းဟာလည်း က​လေးရဲ့ သွား​လေး​တွေ ​ပေါက်​ဖို့ရာအတွက်​ အ​ထောက်​အကူ ပြုလို့ပါပဲ…
ဒါပြင်​.. saliva ရဲ့ တခြား ​ကောင်းကျိုး​တွေလဲ ရှိပါ​သေးတယ်​..
– အစားစားရာမှာ ​ချော့​မွေ​အောင်​ ပြုလုပ်​​ပေးခြင်း
– သင့်​က​လေးရဲ့ ခံတွင်းကို စိုစွတ်​​နေ​စေခြင်း
– အစာမျိုချရာတွင်​ လွယ်​ကူ​စေခြင်း
– သွားပိုးစားတာကို ကာကွယ်ေ​ပးခြင်း​တွေ အပြင်​ အစာကို ​ချေဖျက်​​စေနိုင်​တဲ့ အစွမ်းသတ္တိလဲ ရှိပါ​သေးတယ်​..
– အသက်​တစ်​လမှ သုံးလ​လောက်​ထိ က​လေးဟာ လှဲ​လျောင်း​နေတာ များတတ်​လို့ သွားရည်​တွဲကျခြင်းဟာ သိပ်​မသိသာပါဘူး..သို့​သော်​ က​လေး​ဝမ်းလျား​မှောက်​​​ပေးချိန်​၊ အမှီနဲ့ ထိုင်​ချိန်​မှာ​တော့ သတိထားမိနိုင်​ပါတယ်​…
– အသက်​​ခြောက်​လ​လောက်​မှ က​လေးဟာ သွားရည်​တွဲကျလြင်းကို အနည်းငယ်​ထိန်းနိုင်​လာပါပြီ..သို့​သော်​ သွားစ​ပေါက်​ချင်​​နေချိန်​မှာ အရုပ်​ အရာဝတ္ထုစသည်​တို့ကို ကိုက်​တာမျိုးတို့မှာဆိုရင်​​တော့ သွားရည်​​လေး​တွေ ထွက်​​နေတတ်​ပါ​သေးတယ်​.
– အ​သက်​ ကိုး​လောက်​မှာ.. က​လေးဟာ ကိုယ်​တိုင်​​မှောက်​နိုင်​ပြီး.. တွားသွားတတ်​ပြီ… ဒီလို ​မှောက်​လျက်​သွား​သော်​ငြား သွားရည်​တွဲကျခြင်းကို​တော့ ထိန်းနိုင်​လာပါပြီ..
-အသက်​ ၁၅ လ​လောက်​မှာ.. က​လေးဟာ လမ်း​လျှောက်​နိုင်​ပြီ. ​ပြေးနိုင်​ပြီဖြစ်​ပြီး ဒီလို ချိန်​မျိုးမှာ သွားရည်​တွဲကျခြင်းဟာ ရှားသွားပါပြီ..သို့​သော်​ fine motor activitiesလို့​ခေါ်တဲ့ က​လေးနဲ့ ပတ်​သတ်​တဲ့ ​ဆော့ကစားနည်း​လေး​တွေမှာ အာရုံစိုက်​​နေတာမျိုးလုပ်​ရတဲ့အခါမှာမျိုးမှာ​တော့ တခါတရံ တွဲကျတတ်​ပါ​သေးတယ်​.. ဒါပြင်​ သွား​ပေါက်​ဖို့ရာ အတွက်​လဲ သွားရည်​​လေး​တွေဟာ ပို​တော့ ထွက်​​နေဆဲပါ…
– အသက်​ ၁၈ လ​လောက်​မှာ.. က​လေးဟာ စားစရာ တစ်​ခု​ကြောင့်​. သို့မဟုတ်​ သူကြိုက်​နှစ်​သက်​တဲ့အရာတစ်​ခု​ကြောင့်​သာ သွားရည်​တွဲကျတာမျိုး ရှိတတ်​ပါ​တော့တယ်​..
အသက်​၂ နှစ်​​လောက်​မှာ​တော့ ဒီလို သွားရည်​တွဲကျခြင်းဟာ အနည်းငယ်​မျှ (သို့) လုံးဝ မရှိ​တော့ပါဘူး…
ဒါ​ကြောင့်​ က​လေးငယ်​​လေး​တွေ(toddlers)​အတွက်​ သွားရည်​ တွဲကျခြင်း(saliva drooling)ဟာ ပုံမှန်​ ဖြစ်​သလို ကြီးထွားမှုနဲ့လည်း သက်​ဆိုင်​ပြီး သွား​ပေါက်​ဖို့ရာအတွက်​ အ​ထောက်​အကူပြုနိုင်​ပါ​သေးတယ်​..ဒါပြင်​ က​လေးအား အစား​ကျွေးဖို့ရာ ၊ အစာ​ချေဖျက်​ဖို့ရာ ​တွေမှာလဲ လွယ်​ကူ​စေပါတယ်​..
​ပြောခဲ့သလို က​လေးအသက်​အရွယ်​အပိုင်းအခြားနဲ့လိုက်​ပြီး သွားရည်​တွဲကျခြင်းကို ထိန်းနိုင်​စွမ်းရှိတာမို့.. မိဘ​တွေအ​တွေနဲ့ က​လေးရဲ့ ​နေထိုင်​မှု ပုံစံကို ကြည့်​ခြင်းအားဖြင့်​.. ပုံမှန်​လား… သာမန်​ထပ်​ ပိုပြီး သွားရည်​တွဲကျ​နေလားဆိုတာ သိနိုင်​ပါတယ်​..
က​လေးရဲ့ သွားရည်​ထွက်​တာ၊တွဲကျတာကို ဖြစ်​​စေနိုင်​တဲ့အချက်​​တွေမှာ
– teething လို့အ​ခေါ်တဲ့ ငယ်​သွားစ​ပေါက်​ဖို​ အားယူ​နေချိန်​
– Food အစားအ​သောက်​ကို စိတ်​ဝင်​စားချိန်​
– နှာပိတ်​​နေ၍ ပါးစပ်​ဖြင့်​ အသက်​ရှု​နေတဲ့အချိန်​
– အရုပ်​ (သို့) အရာဝတ္ထု တစ်​ခုကို စိတ်​ဝင်​စားခြင်း
– အာရုံ​ကြောဆိုင်​ရာ ပြသနာ ရှိခြင်း
– ​ဆေးတမျိုးမျိုးနဲ့ ဓာတ်​မတည့်​ခြင်း..ဒါ​တွေ​ကြောင့်​ အဓိက ဖြစ်​​ပါတယ်​…
ဒါပြင်​ က​လေးရဲ့ သွားရည်​တွဲကျတာ​ကြောင့်​ ပါးစပ်​​အောက်​နှုတ်​ခမ်း၊လည်​ပင်းနဲ့ ရင်​ဘတ်​​​တွေမှာ ယားယံတာမျိုးရှိပါက ဆရာဝန်​ကို ​ပြသပြီး သင့်​​လျော်​​သော ​ဆေး လိမ်းတာမျိုး ပြုလုပ်​နိုင်​ပါတယ်​….
က​လေးရဲ့ အသက်​ဟာ ​လေးနှစ်​​ကျော်​သွားထိ သွားရည်​တွဲကျ​နေတာမျိုး ရှိ​နေမယ်​… ဒါမှမဟုတ်​ ​ပြောခဲ့တဲ့ အချက်​​တွေနဲ့ မကိုက်​ညီပဲ သွားရည်​ပိုထွက်​​နေတယ်​လို့ ခံစားရပါက က​လေးအထူးကု (သို့) နီးစပ်​ရာ ​ဆေးရုံ ​ဆေးခန်းမှာ သွား​ရောက်​ပြသပြီး ကုသမှုခံယူနိုင်​ပါတယ်​…
ကျန်းမာ​ပျော်​ရွှင်​ပြီး သန်​မြန်​ ဖျတ်​လတ်​​သော သားသားမီးမီးများ ဖြစ်​ကြပါ​စေလို့ ​တောင်းဆု​မေတ္တာပြုလျက်​….
Clothing and Lifestyle of babies in Winter